‘विद्यार्थीलाई यातायातको सुविधा मिलाउने छु’ « Loktantrapost
‘विद्यार्थीलाई यातायातको सुविधा मिलाउने छु’
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १०:१८
कमल थापा; (अध्यक्ष , काँकरभिट्टा क्याम्पस)
नेपाल बैङ्क लिमिटेडका रिटायर्ड मेनेजर कमल थापा काँकरभिट्टाका बौद्धिक एवम् सामाजिक व्यक्तित्व हुन् । हालै उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काँकरभिट्टा क्याम्पसको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । मिलनसार स्वाभावका थापा राजनीतिक रुपमा सक्रिय देखिन्नन्, तर सामाजिक रुपमा भने उनी सबै आस्था राख्नेहरुसँग उत्तिकै मिलजुल गरेर काम गर्न रुचाउँछन् । अध्यक्ष नियुक्त भएपछि क्याम्पसलाई अघि बढाउने कस्तो सोचाइ छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर लोकतन्त्र पोस्टले लिएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ–
अध्यक्ष नियुक्त हुन पाउँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
काँकरभिट्टा क्याम्पस काँकरभिट्टाको गहना हो । यसको स्थापनामा यहाँका राजनीतिक तथा शिक्षासेवीहरुको ठूलो लगानी छ । दाताहरुले लगानी गर्नु भएको छ । एकेडेमिक क्षेत्रमा मलाई ल्याइयो । यसमा म खुशी छु । म शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमबाट लागिरहेको व्यक्ति हुँ । मेरा छोरा र छोरीहरु डाक्टर–इन्जिनियर छन् । नेपालमा प्राविधिक उच्च शिक्षा सहज रुपमा पढ्न पाउने उचित अवसर नहुँदा बर्षेनी हजारौँ विद्यार्थी विदेश धाउन बाध्य छन् । काँकरभिट्टामै प्राविधिक शिक्षाको बलियो जग बसाउने मेरो भित्री आकांक्षा छ । अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई शिक्षासेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने छु ।
काँकरभिट्टा क्याम्पसको समस्याहरु के कस्ता रहेछन् ?
स्थानीयवासी भएको हुँदा क्याम्पसका धेरै समस्याहरुबारे अवगत छु । कतिपय समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न जरुरी छन् भने केही समस्याको दीर्घकालीन योजनाका साथ समाधान खोज्नु पर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ क्याम्पसमा बिद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने छ । वरपरका ठाउँबाट विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न केही ठोस पहल गर्ने सोचाइ बनाएको छु ।
क्याम्पसको आर्थिक अवस्था कस्तो रहेछ ?
सामुदायिक क्याम्पस भएकाले राम्रो आर्थिक अवस्था छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यति नराम्रो पनि छैन । यस अघि मेचीनगरका नगरप्रमुख विमल आचार्य नै क्याम्पसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले क्याम्पसको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन निकै कामहरु अघि बढाउनु भएको छ । उहाँकै पालामा बनेका सटरहरुबाट क्याम्पसको आम्दानी वृद्धि भएको छ । अझ आर्थिक स्रोत बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर म सोचिरहेको छु ।
मेचीनगरका विद्यार्थीहरु विर्तामोडतिर धाउँछन् । तिनलाई काँकरसिभट्टामै पढ्नका लागि कसरी आकर्षण गर्न सकिएला ?
हरेक अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरीहरुले स्तरीय शिक्षा पाउन् भन्ने चाहना राख्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । तर काँकरभिट्टा क्याम्पसको पढाइको गुणस्तर अरुतिरको क्याम्पसको तुलनामा राम्रो छ । भौतिक संरचना राम्रो छ । शिक्षकहरु नाम चलेका दक्ष र योग्य हुनुहुन्छ । शुल्क समेत महङ्गो छैन । अलिकति सकारात्मक प्रचार हुने हो भने विद्यार्थी सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । गाउँहरुतिरबाट विद्यार्थी आउजाउ गर्नका लागि बसको व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने अभिभावक र विद्यार्थीहरुको माग सुनिन्छ । मैले बाहुनडाँगी र ज्यामिरगढीतिरका विद्यार्थी आवतजावत गर्नका लागि यातायातको प्रबन्ध मिलाउने सोचाइ बनाएको छु । क्याम्पसले आफै गाडी किन्ने अवस्था छैन । काँकरभिट्टाका विभिन्न यातायात व्यवसायीहरुसँग कुरा गरेर विद्यार्थीहरुलाई यातायातको सुविधा दिलाउने मेरो सोचाइ छ ।
स्थानीय समाजबाट क्याम्पसले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ?
क्याम्पसमा भर्खरै अध्यक्ष भएर म आएको छु । क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती पनि भर्खरै नियुक्त हुनु भएको छ । हामी दुबै जना नयाँ भएको हुँदा सबैभन्दा धेरै सहयोग यस अघि क्याम्पस प्रमुख बन्नु भएको यज्ञराज प्रसाई र अध्यक्ष रहनु भएका नगर प्रमुख विमल आचार्यबाट प्राप्त हुने आशा गरेका छौँ । काँकरभिट्टामा थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरु क्रियाशील छन् । यहाँ मुलुक हाँक्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरु काँकरभिट्टामै हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबै महानुभाव र संस्थाहरुबाट सक्दो सहयोग र प्रोत्साहन पाउने अपेक्षा गरेको छु । म राजनीतिक व्यक्ति होइन । म पनि थुप्रै सामाजिक संस्थाहरुमा इमान्दारीका साथ लागिरहेको हुँदा मलाई सबैको सद्भाव प्राप्त हुनेमा म विश्वस्त छु ।